ခတ်နှင့်အတူ IL-76 MD အသစ်များကို / ပြဿနာများငါခတ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့နည်းလမ်းရှာနိုငျပါသညျ!
ခတ်နှင့်အတူ IL-76 MD အသစ်များကို / ပြဿနာများငါခတ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့နည်းလမ်းရှာနိုငျပါသညျ! 11 လအတွင်း4weeks ago #1465
ရက်ပေါင်းတစ်စုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့ငါ VC ကိုအတူအလွန် beautyfull IL-76 MD ကို download လုပ်ပါကအလွန်ကောင်းတဲ့လေယာဉ်များနှင့်အလွန်ကောင်းသောအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ FSX, တစ်ခုတည်းသောပြဿနာ (နှင့်ကအရူးငါ့ကိုမောင်းထုတ်!) ငါခတ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မနိုင်ကြောင်း, ငါသည်လမ်းခရီးကိုမတှေ့နိုငျဖြစ်ပြီး, အလွန်စိတ်ပျက်စရာပါ!
တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုကူညီနိုင်လျှင်အရမ်း thankfull ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ!
ခတ်နှင့်အတူ IL-76 MD အသစ်များကို / ပြဿနာများငါခတ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့နည်းလမ်းရှာနိုငျပါသညျ! 10 လအတွင်း4weeks ago #1485
ခတ်နှင့်အတူ IL-76 MD အသစ်များကို / ပြဿနာများငါခတ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့နည်းလမ်းရှာနိုငျပါသညျ! 10 လအတွင်း2weeks ago #1493
အဆိုပါဘရိတ်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပေါ်ဖြစ်ကြပြီးငါလေယာဉ် uninstall လုပ်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။